" အိမ်မှာပဲ Stay Homeနေကာ အိပ်ရာထက်က သူမရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အလှ​တွေကို ချပြခဲ့တဲ့မေ'' - Cele Connections
” အိမ်မှာပဲ Stay Homeနေကာ အိပ်ရာထက်က သူမရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အလှ​တွေကို ချပြခဲ့တဲ့မေ”
Candy | 07/10/2020 | Celebrity | No Comments
CeleConnections ပရိသတ်ကြီးရေ မေကတော့ သရုပ်ဆောင်အပြင် ဂီတဘက်မှာလည်း အောင်မြင်တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံကျော်မင်းသားကြီး ဒွေးရဲ့ “မင်းလေးကိုချစ်လို့” သီချင်းကို ပုံစံပြောင်းပြီး ပြန်ဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေးကလည်း ပရိသတ်တွေပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ” Lost ” သီချင်းကတော့ ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားခဲ့ပြီး “ကြယ်” new version ဟာဆိုရင်လည်း ပရိသတ်တွေ ကြွေခဲ့ရတဲ့ သီချင်းပဲ ဖြစ်ပြီး “Marry Me” ဆိုတဲ့ သီချင်းအယ်လ်ဘမ်ထွက်ရှိထားပါသေးတယ်။
လတ်တလောမှာလည်း ”ဖြေပါbaby”သီချင်းသစ်လေးထွက်ရှိထားပြန်ပါသေးတယ်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေများစွာလည်းရိုက်ကူးသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့မေကို မိန်းကလေးတွေအားကျရတဲ့ အဆီမရှိတဲ့ သွယ်လျတဲ့ ဘော်ဒီကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးပါ။ ဒါ့အပြင်အနုပညာမောင်နှမတွေအပေါ်လည်း ခင်မင်ဖော်ရွေတတ်သူပါ။.
လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ Covid 19 ကပ်ရောဂါကြောင့် မေလည်း Stay Homeနေနေတာဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်မပြတ်သွားအောင်လည်း အိမ်မှာနေရင်းပုံရိပ်လေးတွေကိုအမြဲဝေမျှလျက်ရှိတာပါ။ဒီနေ့မှာတော့ ” Stay home ကာလမှာ အိပ်ယာနိုးလဲ ပြန်အိပ်ပါပဲရှင်”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့အတူ အိမ်မှာနေရင်း အိပ်ရာထက်ကအလှပုံလေးတွေကိုဝေမျှခဲ့တာပါ။ CeleConections ပရိသတ်ကြီးလည်း အိမ်မှာနေရင်းတောင်လှနေတဲ့ မေ ရဲ့ပုံလေးတွေကိုသဘောကျရင်မှတ်ချက်တစ်ခုခုပေးခဲ့ပါဦးနော်။ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ CeleConections ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Source: Candy May
” အိမျမှာပဲ Stay Homeနကော အိပျရာထကျက သူမရဲ့ ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ အလှတှကေို ခပြွခဲ့တဲ့မေ”
CeleConnections ပရိသတျကွီးရေ မကေတော့ သရုပျဆောငျအပွငျ ဂီတဘကျမှာလညျး အောငျမွငျတဲ့မငျးသမီးတဈလကျဖွဈပွီး နိုငျငံကြျောမငျးသားကွီး ဒှေးရဲ့ “မငျးလေးကိုခဈြလို့” သီခငျြးကို ပုံစံပွောငျးပွီး ပွနျဆိုထားတဲ့ သီခငျြးလေးကလညျး ပရိသတျတှပေါးစပျဖြားမှာ ရပေနျးစားခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ ” Lost ” သီခငျြးကတော့ ပရိသတျတှကွေားမှာ ရပေနျးစားခဲ့ပွီး “ကွယျ” new version ဟာဆိုရငျလညျး ပရိသတျတှေ ကွှခေဲ့ရတဲ့ သီခငျြးပဲ ဖွဈပွီး “Marry Me” ဆိုတဲ့ သီခငျြးအယျလျဘမျထှကျရှိထားပါသေးတယျ။
ရုပျရှငျဇာတျကားတှမြေားစှာလညျးရိုကျကူးသရုပျဆောငျခဲ့တဲ့မကေို မိနျးကလေးတှအေားကရြတဲ့ အဆီမရှိတဲ့ သှယျလတြဲ့ ဘျောဒီကို ပိုငျဆိုငျထားသူလေးပါ။ ဒါ့အပွငျအနုပညာမောငျနှမတှအေပျေါလညျး ခငျမငျဖျောရှတေတျသူပါ။.
လကျရှိဖွဈပှားနတေဲ့ Covid 19 ကပျရောဂါကွောငျ့ မလေညျး Stay Homeနနေတောဖွဈပွီး သူမရဲ့ပရိသတျတှနေဲ့အဆကျမပွတျသှားအောငျလညျး အိမျမှာနရေငျးပုံရိပျလေးတှကေိုအမွဲဝမြှေလကျြရှိတာပါ။ဒီနမှေ့ာတော့ ” Stay home ကာလမှာ အိပျယာနိုးလဲ ပွနျအိပျပါပဲရှငျ”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့အတူ အိမျမှာနရေငျး အိပျရာထကျကအလှပုံလေးတှကေိုဝမြှေခဲ့တာပါ။ CeleConections ပရိသတျကွီးလညျး အိမျမှာနရေငျးတောငျလှနတေဲ့ မေ ရဲ့ပုံလေးတှကေိုသဘောကရြငျမှတျခကျြတဈခုခုပေးခဲ့ပါဦးနျော။ဖတျရှုပေးကွတဲ့ CeleConections ပရိသတျကွီးအားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
လူတွေအများကြီးနဲ့ ရိုက်ကူးရေးလုပ်ရမယ့်အတွက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် သံသယကင်းရှင်းအောင် ကိုဗစ်ပိုးရှိမရှိ စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ နေခြည်ဦး
The Voice Myanmar ကနေ နှစ်ခါတိတိနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာလာရပေမယ့် Team KP အဖွဲ့သားတစ်ယောက်အနေနဲ့ သေရာပါတက်တူးထိုးခဲ့တဲ့ ဘဝ